Garee cimaa Piriimeer Liigii, Gaarz Kiruuks: Aguweeeroo, Heesus, Dee Biruuyine, Vaaleensiyaa, Koolaasinaach - BBC News Afaan Oromoo
Xiinxalaa Kubbaa MiilaaGaarz Kiruuks'n
Maanchistar Siitii fi Maanchistar Yunaayitid jalqabbii gaarii bara dorgommii kanaa, injifannoo gurguddoo Siitiin 6-0 Waatfoord fi Yunaayitid 4-0 Eevartan irratti galmeessisaniin itti fufsiisaniiru.
Maanaajarri Kiriistaal Paalaas Rooy Haadsan, Saawuz Haapitaniin 1-0 moo'amuun jalqabbii hin taane itti ta'eera.
Liivarpuul Barnileey waliin walqixa yoo ba'an, Niiwukaastil Istookiin injifateera. Boornmaawuzis sa'aatii dhumaa irratti Biraaytan 2-1 moo'uun yeroo jalqabaaf qabxii 3 argataniiru.
Tootenhaam fi Siwaansii, Weestihaam fi Weest Biroom galchii malee walqixa yoo bahan, Haadersifiild Leeyiseester Siitii iraa qabxii tokko fudhachuu danda'aniiru.
Karra eegaa - Niik Poop (Bernileey)
Niik Poop kubbaa galchii ta'u 8 qoleera, dhuma torbee kanatti Luukaas Faabiyaaniskii waliin ta'uun , karra eegaa kubbaa hedduu qole ta'eera.
Niik Poop torbee darbe erga Toom Hiitan jijjiiruun galee booda dhiibbaa cimaa jalatti dandeettii agarsiiseen garee cimaa koo keessatti galuu dhabuunsaa abbaa carraa isa hin goone.
Liivarpuul kaka'umsa injifannoo Chaampiyoons Liigiitiin kaka'uun wayita Bernileey waliin taphatanitti ciminni agarsiise, Poop karra eegaa Chaampiyoons Liigiif dorgomuu danda'u ta'uusaa agarsiisee jira.
Taphataa sarara duubaa - Jamaal Laasseelees (Niiwukaastil)
Kubbaawwan Jamaal Laasseelees Piriimeerliigii keessatti lakkofsise afran isaaniituu kan lakkaa'aman kubbaa roga irraa dhufaniini.
Istaadiyeemii Seent Jams Paarkitti amma gammachuu guddaatu jira. Kanaaf ammoo sababni guddaan Jamaal Laasseelees ta'uunsaa omaa na hin dinqine.
Torbee darbetti Siwaansii irratti lakkoofsisuun akkasumas Istook irratti dabaluun isaa dursaan taphattootaa Niiwukaastil kun akka sodaatamu isa taasisaa jira.
Taphataa sarara duubaa - Jooyeel Maatiipp (Liivarpuul)
Hagayya 2016 yeroo jalqabaaf piriimeerliigiitti taphachuu erga eegalee, tapha Jooyeel Maatiipp irratti hirmaate, Liivarpuul %59 injifateera, yeroo inni hin taphannetti injfannoo %44 galmeessisaniin yoo walbira qabamu.
Jooyeel Maatiipp taphataa sarara duubaa fedhii guddaan taphatu dha. Osoo taphataan Kaameeruun kun hin jiraannee, tarii carraan Liivarpuul Bernileyiin injafatamuu guddaa ture.
Kubbaa Been Mii irraa yaalamte mataadhaan haalli itti deebisee gatii gudaa kan qabdu turte.
Taphataa sarara duubaa - Shikoodiraan Musxaafii (Arseenaal)
Bara kanatti kubbaa galuu malu baasuun Shikoodiraan Musxaafii yeroo 16 yoo ta'u, Naachoo Moonriyaal qofatu yeroo 21 baasuun Arseenaal keessatti isa caala.
Musxaafiin tapha darbii Landan irratti daqiiqaa 90 guutuu Alvaaroo Mooraataaf carraa kubbaa tokkollee itti rukutu hin kennineefi.
Arseenaalonni gurjaa/abjuu injifatamuu torbee muraasa dura Aanfiilditti isaan mudate keessaa waan ba'an fakkaatu. Yoo Musxaafii, Loowurent Kooschiyeelnii fi Siid Koolaasiinaach dandeettii amma qabaniin itti fufan, carraan Arseenaal sadarkaa 4 keessatti xumuruuf qabu haala ajaa'ibsiisuun fooyya'uu mala.
Sarara bitaa duubaa - Antooniyoo Vaaleensiyaa (Maanchistar Yunaayitid)
Antooniyoo Vaalensiyaa (bitaarratti) taphoota piriimeerliigii 12 dirree isaaniirratti taasisaniifi Maanchistar Yunaayitidiif galchii itti lakkoofsise hundumaa injifateera.
Yeroo hedduu galchii hin lakkoofsisu garuu Eevartan irratti kubbaa galche kanaaf hangas turuun isaa gaarii ture. Kubbaa sana humna cimaadhaan rukutuu isaatiin osoo karra eegaan Eevartan Joordaan Piikfoord qilleensarra jiruu ture kan saaphana tuqxe.
Tapahtaa gidduu - Keeviin Dee Biruuyine (Maanchister Siitii)
Madda suuraa, Rex Features
Erag Maanchistar Siitiif Fulbaana 2015 irraa kaasee taphachuu eegalee, kubbaawwan galchiif ta'an hedduu (30) mijeessee kennuun Priimeer Liigii keessatti kan isa caalu hin jiru.
Taphataan gabaabaa dirree keessa jiru akkamiin galchii bareedduu mataadhaan lakkoofsisuu danda'a? Yoo sirriitti mijatee kennameef-icciitiinsaa sanadha.
Serjiwo Aguweeroo kubbaawwan Keeviin Dee Biruuyine irraa mijatanii dhufaniin alatti, gatii hin qabaatu ture. Yeroo Waatfoord Maanchistar Siitiin akka hin taanetti moo'amanittis taphataan kun waan itti bare hojjachaa ture.
Taphataa gidduu - Maariyoo Leemiinaa (Saawiz Haampitan)
%90 kubbaa sirrii ta'e kennuun, taphattoota Saawuzhaampitan kamiyyuu ni caala.
Baay'ee ajaa'iba, taphataan kun kuusa-humnaa fakkaata.
Liigii gurguddoo adduunyaa keessaa isa tokkotti (Piriimeerliigii) taphatteetta taanaan, liigii kam keessattuu taphachuuf dandeettii siif hora jedheen yaada. Haa ta'u malee, taphataa Saawuzhaampitan Maariyoo Leeminaa irraa wanti ani arge, sochii Kiriistaal Paalaas taasisan hunda kan to'atee turedha.
Taphataan Juuveentuus duraanii kun, kubbaa irratti kan xiyyeeffatee fi yeroo kubbaa miliqsu sa'aatiisaa eeggachuun ture. Taphataa sarara giduuf ammoo kun baay'ee jajjabeessaa dha.
Leemiinaan taphattoota 1-4 keessa galan keessaa, akka ilaalcha kootiiti isa tokkodha. Saawuzhaampitan isa bituu isaaniittis abshaalomaniiru. Maaliif Liivarpuul yookaan Arseenaal keessatti akka hintaphanne garuu anaaf icciitii dha.
Sarara duubaa (Wing-back) - Se'aad Koolaasiinaach (Arseenaal)
Bara kanatti, Se'aad Koolaasiinaach caalaa kubba 2 mijeessee kan kenne Arseenaal Keessa hin jiru.
Se'aad Koolaasiinaach akka gamoo waraana adduunyaa 2ffaa irratti boombii dandadamatniitti ijaarame.
Erga tapahataan duubaa cima koo bara darbee Daaviid Luwiiz akka hin taanetti rukuteen booda tapha sana xumuruuf fedhii inni agarsiise guddaa ture.
Cheelsiin Arseenaal waliin yeroo taphatutti taphataan kaardii diimaadhaan yeroo dirree keessaa ari'amu kun yeroo sadaffaafi. Kun ammoo Cheelsiin Arseenaal waliin yoo taphatu naamuusa kabajuu hin danda'anuuyii? Gaaffii jedhu kaasa.
Fuldurarratti - Mohaammad Saalaa (Liivarpuul)
Mohaammad Saalaa caalaa taphataan Liivarpuul kamiyyuu galchii irratti hin hirmaanne. Galchii afuriin irratti hirmaateera.
Mohaammad Saalaa Liivarpuulitti taphataa cimaa ta'aa jira. Galchiiwwan 7 irratti erga Aanfiilditti dhufeen booda hirmaachuun isaa taphataan Masrii kun kubbaadhaan bohaaraa akka jiru mullisa.
Fuuldurarratti - Sejiyoo Aguweeroo (Maanchistar Siitii)
Serjiyooo Aguweeeroo taphoota jalqabaa walitti aanan 7 dirreen alatti taasisan irratti galchii lakkoofsise jira
Taphataan Aarjentiinaa kunis waan itti tolee jiru fakkaata.
Aguweeroof haatriikii 3ffaa Priimeerliigii yoo taatu Siitii keessatti ammoo 10ffaa isaati.
Sarar Duraa - Gaabri'eel Heesuus (Maanchistar Siitii)
Taphoota Maanchistar Siitiif taasise 15 irratti galchiiwwan 15 keessatti qooda qaba.
Taphataan tokko ciminni isaa kan mullatu yeroo gareen faallaa cimsanii qabanitti harka kennuu yoo hafudha.
Waatfoordis kanuma gochaa turani. Joosee Hoolebaas fi Daaryiil Yaanmat qaamaan yeroo danqaa itti ta'uuf yaalanitti, Gaabr'eel Heesuus galchii lakkoofsisuun deebii sirrii itti kennaa ture.
Daqiiqaa 28 dura
Muuxannoo waggaa zeerootiin hojii argachuun maaliif ulfaataa tahe?